Q: 2 GARAADSO INTAADAN GUURSAN – dhugasho
maxamedsheekafguun Nofeembar 30, 2018 sheekooyin
Q: 2 GARAADSO INTAADAN GUURSAN
Halkaas ayay inoo maraysay
Qormadan, oo hadduu Rabbi idmo taxane noqon doonta, qeybaheeda horana aan wiilasha kula hadli doono ayaa waxaan u hibeeyey dhallinta Soomaaliyeed ee guurdoonka ah iyo waliba qof kastoo jecel inuu yagleelo (dhiso) guri iyo sowjad (Xaas) sabab u noqota inuu ku naaloodo (raaxaysto) nolol ey farxad, xasillooni, deganaan iyo jaceyl ku dheehanyihiin. Waxaa la yiraahdaa,
“ما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب يطمئن اليه ويسكن”
‘’Nolosha macaankeeda muusan dhadhamin qofkii aan laheyn xaas uu ku xasilo oo uu ku dego,’’
1. MARKA HORE INTA AADAN RAADIN QOF WANAAGSAN, ADIGU NOQO MID DHOWRSAN?
Isku day inaad noqoto qof dhowrsoon marka hore, qof Alle ka baqa, qof ku xiran diinta Alle. Haku mashquulin inaad raadiso qof wanaagsan adoon taada marka hore wanaajin. Marka hore wiilyahow noqo Maxammed dhowrsoon waxaad heleysaa Khadiijo dhowrsoone.
Qofkii wanaagsan wuxuu helaa qof wanaagsan, qofka xunna wuxuu helaa qof xun. Sidaa daraadeed naftaada wanaaji Eebbena ma dayici doono dedaalkaaga, oo wuxuu kuu sahlayaa qof dhowrsoon oo aad adduunyada raaxo kuwada noolaataan.
2. SIDEEN U DOORTAA GABADH WANAAGSAN MAXAANSE KU DOORTAA?
Gabar dhawr tilmaamood ayaa sababa guurkeede:
Midbaa quruxda loo guursadaa laguna gaataaye
Midna magaca qooskey gashey guur ku mudataaye
Midna gunudda ey heysatuu kaa galaa damace
Geelow si gaara u ogaw tan u gadaaleysa”